Maxaa ka jira in nabigu madhalays ahaa? – Kaasho Maanka
Waydiintan sare ku xusan si aan uga jawaabno waxaa muhiim ah in aan taariikhda u akhrino qaab ka fog caadifad diineed oo aan caqliga u bandhigno. Waxaa muhiim ah inaan ogaano taariikh nololeedkii ama siiradii nebiga ee ugu horreeysay in la qoray 200 sano kadib geeridiisii, waqtigaas is bedello badan ayaa dhacay oo muslimiintu dhulal badan oo diimo iyo dhaqamo kala duwan leh ayay ku fideen oo is dhex-galeen, dadka qorayna wax badan oo taariikhdaas ka mid ah suura gal uma ahayn inay xaqiijiyaan, sidoo kale waxa jiray dano siyaasadeed oo ragga amray in la qoro ama kuwa qorayayba lahaayeen.
Waxaa kaloo mudan inaan ogaano madhalaysnimadu inaanay ceeb ahayn ama wax lala yaabo, laakiin waagii nebigu joogey waxay ahayd ceeb dhabar jab ah oo raganimada ninka meel ka dhac ku ah. Marnaba madhalaysnimo denbi maaha waxaase denbi iyo gef ah in taariikhda laga been sheego.
Marka laga hadlayo dhaqamada nebi Maxammed waxaad moodaa in muslimiinta badankoodu inta quruxda badan ka qaataan balse wixii la fool-xun dhaqamdiisa ay ka gaabsadaan lagana yaabaa inay isku dayaan qarinteeda, tusaale ahaan ka maqli masyid iyagoo ku faanaya in nebiga galmada ku waalnaa oo haween badan la seexan jiray, kuwaas oo qaar kamida uu guursadey qaarna ay addoomihiisa ahaayeen, halka ay jireen qaar hadiyad ahaan loo siiyey iyo kuwa isu hibeeyey ama isagu ka codsaday inay isu hibeeyaan si uu ula seexdo.
Haweenkaa badan ee aan xusnay badankooda nebigu wuu u galmooday, waxaa kaloo la inoo sheegay in nebigu ahaa nin aad u galmo jecel, xiliyada qaarna uu isu mari jirey hal habeen sagaal haween ah, waxaas oo dumar ah nebigu waxba kama dhalin marka laga reebo sheegasho ah in xaaskiisii u horraysay ee Khadiija dhawr caruura u dhashay iyo wiilkii ay Maariya Al-Qibdiyah u dhashay balse uu dafiray kana shakiyay inuu isagu dhalay.
Khadiija oo da’da afartameeyada ku jirtey markii Maxammed la aqal galay inay dhowr ubad ah dhasho lafteeda far ayaa ku godan, waxa kale oo is waydiin mudan innagoo og nebigu siduu u galmo jeclaa iyo haweenka badan ee uu isu mari jirey hal habeen, maxaa keenay in la waayo hal kamida oo uur qaadda?
Caasha oo lix jir lagu siiyey ilaa sagaal jirkeediina uu baashaalin jiray(gelid la’aan), inta badanna uu iyada la joogey maxay wax u dhali waydey? Sidoo kale waxa aynu ka war haynaa in haweenkii carmalka ahaa ee nebigu guursadey badi ay hore wax u soo dhaleen oo aan iyaga eed la saari karin.
Nebigu inuu madhalays ahaa waxay ahayd sheeko ay reer tolkii og yihiin xilliyada qaarna waaba ku dacaayadeen jireen, waxa la sheegaa in rag badan oo uu ka mid ahaa Caas Bin Waa’il ay nebiga ku odhan jireen ma dhalays baad tahay iyagoo adeegsaneya ereyga (اﻻﺑﺘﺮ) ee quraankana ku soo arooray.
Waxaa kaloo jirtey haweeney Masriyad ah oo nebiga hadiyad ahaan loo siiyey lana odhan jirey Maariya El-Qibdiyah (مارية القبطية) oo ah ta keliya ee la hubo inay wiil u dhashay, waxaa isaguna jirey nin ay qaraabo ahaayeen Maariya oo addoon ahaa badanaana guriga ku soo booqan jirey in nabigu uga shakiyay inuu xaaska u dabo maro oo la wadaago.
ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﺃﻥ ﺭﺟﻼً ﻛﺎﻥ ﻳُﺘﻬﻢ ﺑﺄﻡ ﻭﻟﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻝ ﻋﻠﻲ : ‏ﺍﺫﻫﺐ ﻓﺎﺿﺮﺏ ﻋﻨﻘﻪ ‏ ، ﻓﺄﺗﺎﻩ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺭﻛﻲٌّ – ﺃﻱ ﺑﺌﺮ – ﻳﺘﺒﺮّﺩ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ : ﺃﺧﺮﺝ ، ﻓﻨﺎﻭﻟﻪ ﻳﺪﻩ ﻓﺄﺧﺮﺟﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻮ ﻣﺠﺒﻮﺏ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺫﻛﺮ ، ﻓﻜﻒّ ﻋﻠﻲٌّ ﻋﻨﻪ ، ﺛﻢ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ فقال : ‏ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ، ﺇﻧﻪ ﻟﻤﺠﺒﻮﺏ ﻣﺎﻟﻪ ﺫﻛﺮ (صحيح مسلم) .
Xadiiskan sida ku cad nebigu nin addoon ah ayuu uga shakiyey inuu xaaskiisa Maariya u dabo maro wuxuuna amray Cali Bin Abi-Daalib inuu qoorta ka jaro, balse markii uu damcay inuu dilo ayuu ka war-helay inuusan ninkani xubintii taranka ee raggaba lahayn.
Wiilkay dhashay gabadha Maariya ee addoonta ah nebigu wuu qaadan waayey maadaama uu is ogaa inuu madhalays yahay, wuxuuna u yimi Caasha isagoo raba inay arrintan talo ku darsato, Caashi waxay ugu jawaabtey kelmed ka yaabisay nebiga, waxayna ku tiri (Kuuma eka ilmahani – ما ارى اي شبه), hadalkan oo ah cadkaagii maaha ilmahani.
Xaasaskii Maxammed ma jirin mid aan jeclayn inay ilme u dhasho weliba wiil nebinimada dhaxla sida nabiyadii Yuhuudda laakiin nasiib darro isaga oo aan dhaafin yar iyo wayn, gabadh iyo garoob midna hadana kuma guulaysan inuu mid kaliya caloosha u buuxiyo.
Deegaanka Carabta waxaa ka jirey waqtigaas guurar noocya badan, waxaana guurarkaa kamid ahaa mid la yidhaahdo (ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺿﻌﺔ) oo ahaa in ninku xaaskiisa u geeyo nin kale oo dagaalyahannimo, qurux iyo nasabnimo isku darsaday, wuxuuna ka codsan jirey inuu xaaska u fuulo si ay ilme isaga oo kale ah ugu dhasho, waxay u egtahay xaasaskii nebigu inay damceen inay rag doontaan si ay ilmo nebinimada dhaxla u dhalaan, waxaana ka mid ahaa haweenkaas Caasha iyo Maariya.
Maariya Al-Qibdiyah ninkii lagu eedeeyey wuxuu noqday nin aan lahayn xubinta taranka, ilmihii ay dhashayna waa la diley si aanu ceeb nebiga ugu soo jiidin. Ummul mu’miniin Caasha iyadana waxaa lagu eedeeyey inay nin la seexatay, tolow ninka lagu eedeeyey waa kuma? Mase yahay nin ay ka suurtawdo inuu ummul mu’miniinta u galmoodo haddii uu cidlo ka helo?
ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺻﻔﻮﺍﻥَ ﺑﻦِ ﺍﻟﻤﻌﻄَّﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻧﺤﻦ ﻋﻨﺪﻩ، ﻓﻘﺎﻟﺖ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﺇﻥ ﺯﻭﺟﻲ ﺻﻔﻮﺍﻥَ ﺑﻦَ ﺍﻟﻤﻌﻄَّﻞ، ﻳﻀﺮﺑﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺻﻠﻴﺖ، ﻭﻳﻔﻄِّﺮﻧﻲ ﺇﺫﺍ ﺻﻤﺖ، ﻭﻻ ﻳﺼﻠِّﻲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻠﻊَ ﺍﻟﺸﻤﺲ . ﻓﺴﺄل الرسول صفوان ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻬﺎ : ﻳﻀﺮﺑﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺻﻠﻴﺖ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﺃ ﺳﻮﺭﺗﻴﻦ، ﻓﻘﺪ ﻧﻬﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮﺭﺓً ﻭﺍﺣﺪﺓً ﻟﻜﻔﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻬﺎ : ﻳﻔﻄِّﺮﻧﻲ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﻡ ﻭﺃﻧﺎ ﺭﺟﻞٌ ﺷﺎﺏٌّ ﻓﻼ ﺃﺻﺒﺮ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ : ﻻ ﺗﺼﻮﻣﻦَّ ﺍﻣﺮﺃﺓٌ ﺇﻻّ ﺑﺈﺫﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ .
Ninka Caasha lagu eedeeyey inay la seexatay waa Safwaan Bin Mu’atal, waa nin galmo jacayl dartii xaaskiisa ku garaaci jirey haddii ay salaadda ku dheeraato amaba soonto, isagoo leh ma sugi karo ama ma joogi karo galmo la’aan inta ay salaadda ku jirtana ha ahaate, wuxuu caddeeyey galmo la’aan inaanu fadhiisan karin. hadaba sawiro ninkaas oo ilmihii yaraa ee qurxuda loo dhameeyey (Caasha) ka helay cidla oo habeenna la dhaxay, ma idin la tahay inuu dhaafayo? Caasha lafteeda waxaa suuragal ah in ujeedka ay safarka uga hartay ahaa inay habeenkaas shaqayso oo ay hooyo noqoto, wiilna dhasho.
Waxa iyana is waydiin mudan haddii Illaahay u kaadiyay arrinta Caasha muddo bil ka badan kadibna aayado ku soo dejiyey arrinteeda, muxuu waqti kaa lamida u siin waayay xaaskiisii addoonta ahayd ee Maariya? Maxaa ku kallifay isaga oo aan xitaa hubin in ninkaasi xubin taran leeyahay inuu faro dilkiisa? Miyayna kuu caddayn in Maxammed Safwaan kaga haybaysanayay qabiilka wayn ee uu ka dhashay balse addoonka aan waxba galabsan ayna jirin cid uu ku dhaafaa?
Nebigu si aanu u fashilmin wuxuu mamnuucay in dabadii haweenkiisa la guursado, waxaa hubaal ah haddii laga daba guursan lahaa inay caddaan lahayd inuu madhalays yahay markay ubad dhalaan, waxaa kaloo caddayn u ah wuxuu xidhay albaabkii samada oo wuxuu yidhi ma jiro nebi iga danbeeyaa, markay u caddaatay inaanu waxba dhali doonin.
Waxaa iswaydiin mudan haddii Khadiija ubad u dhashay maxaa diidey kuwii da’ ahaan ka yaraa inay dhalaan? Khadiija nebiga hortii laba nin bay guursatey oo caruur u dhashay, soo suurta gal maaha inay raggaa u dhashay Maxamedna uuna ahayn wax ka badan gacan yaraheedii ganacsiga u maamulayay kadib markii ay ka heshayna guursatay?
Caasha carruur dhillaysi Guurka Khadiija Maariyah Safwaan
Lacnad ha kugu dhacdo Murtadyahaw haka beensheegin Nabigeena SWC.
W/Q: Khaled Hassan 7th August 2018